BBC Somali - Warar - Codadka doorashada Gambia oo la tirinayo
Codadka doorashada Gambia oo la tirinayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 Novermber, 2011, 13:22 GMT 16:22 SGA
Madaxweyne Yaxye Jammeh ayaa waxa uu afganbi ku qabsaday dalka 17 sano ka hor
Boqolkiiba labaatan codadka la tiriyay doorashooyinka Madaxtinimada ee Gambia, ayaa waxa ay u muuqataa inuu ku guuleysan doono Madaxweynaha talada haya, Yahya Jammeh.
Korjoogayaasha ka socda galebeedka Afrika, ayaa sheegay in aanay noqon doonin doorashooyin xor ah oo cadaalada ah.
Madaxweyne Yaxe Jammeh oo awoodda ku qabsaday afganbi muddo haatan laga joogo 17 sano, ayaa waxa uu rajeynayaa inuu ku guuleysti shan sano oo kale.
Ururu goboleedka ECOWAS ayaa waxa aya sheegeen in aanay wax kormeerayaal ah u diri doonin sababtuna waxa ay tahay heerka saxaafadda oo ah mid aan la maamuli karin, iyo hanjabaadda mucaaradka loo geysanayo.
Midowga Yurub iyo Midowga Afrika labadaba waxay direen korjoogayaal.
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka ee dalka -- Alhaji Mustapha Carayol -- ayaa edeeymahaasi beeniyay.